सेलपेलेको आकर्षक अफर,बैंक खाता सेलपेमा लिंक गरी रु. १०१ को वालेट ब्यालेन्स | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
सेलपेलेको आकर्षक अफर,बैंक खाता सेलपेमा लिंक गरी रु. १०१ को वालेट ब्यालेन्स
काठमाडौं= नेपाल राष्ट्र बैंक बाट लाइसेन्स प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) सेलकम प्राइभेट लिसिटेड–सेलपेले आकर्षक अफर ल्याएको छ। जसमा ग्राहकले आफ्नो बैंक खाता सेलपेमा लिंक गरी रु. १०१ को वालेट ब्यालेन्स तत्काल प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यसका साथै ग्राहकले हरेक हप्ता रु. ५हजारको सेलपे कार्ट भाउचर कुपन जित्ने मौका पनि पाउँछन्। यो अफर १५ मे २०२२ बाट सुरु हुन्छ र १६ अगस्ट २०२२ अन्त्य हुनेछ।
यसका लागि प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट सेलपे एप डाउनलोड गर्नुहोस्। यदि तपाइँ नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने साइन अप गर्नुहोस् नत्र लगइन गर्नुहोस्।
साइन अप गर्नका लागि आवश्यक विवरण टाइप गर्नुहोस् र सबमिट गर्नुहोस्। तपाइँले फोन प्रमाणीकरणका लागि इत्ए कोड प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो कोड टाइप गर्नुहोस् र सबमिट क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सेलपेमा तपाइँको प्रोफाइल बनाइनेछ। साइन अप गरेपछि केवाईसी अपडेट गर्नुहोस्।
केवाईसी अपडेट गरेपछि म्यानेज अकाउन्टमा जानुहोस् र आफ्नो सुविधाको बैंक लिंक गर्नुहोस्।
तपाइँको आफ्नो बैंक सेलपेमा प्रथम पटक लिंक भएपछि तपाइँले १०१ को वालेट ब्यालेन्स तत्काल प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसले तपाइँलाई प्रत्येक हप्ता रु. ५हजारको भाउचर कुपन जित्न योग्य बनाउनेछ।
-ग्राहकले पूर्ण केवाईसी प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ।
-सेलपेमा ग्राहकको खाता उहाँहरुको बैंक खाताहरुसँग लिंक हुनुपर्नेछ।
-यो अफर आफ्नो बैंक खाता पहिलोपटक लिंक गर्ने सबै ग्राहकका लागि मान्य छ।
-आफ्नो बैंक खाता लिंक गर्नाले तपाइँले रु। ५ हजारको भाउचर जित्न मौका पाउनुहुनेछ।
-सेलकम प्रालिद्वारा यस अभियानका सबै निर्णय आफैँले लिने छन्। यदि प्रयोगकर्ताले त्यहाँ कुनै गैरकानुनी, अयोग्य कार्य गर्नुभएको छ भने सेलकम प्रालिद्वारा प्रयोगकर्तालाई पुरस्कार प्रदान नगर्ने, प्रयोगकर्तालाई अयोग्य ठहराउने अधिकार सुरक्षित राख्दछ।